Naharihariny Ireo Mpihatsaravelatsihy (Matio 23) | Fiainan’​i Jesosy
Nomelohin’i Jesosy Ireo Mpanohitra Azy
MATIO 22:41–23:24 MARKA 12:35-40 LIOKA 20:41-47
ZANAK’IZA MOA I KRISTY?
NAHARIHARIN’I JESOSY FA MIHATSARAVELATSIHY IREO MPANOHITRA AZY
Tsy vitan’ireo mpanohitra ny nanala baraka an’i Jesosy sy ny namandrika azy mba ho azo atolotra ny Romanina. (Lioka 20:20) Mbola tao amin’ny tempoly i Jesosy ny 11 Nisana. Izy indray no nanontany azy ireo sy nampiharihary hoe iza marina izy. Hoy izy: “Ahoana ny hevitrareo momba an’i Kristy? Zanak’iza moa izy?” (Matio 22:42) Hoy ireo: “Zanak’i Davida.” Efa fantatry ny rehetra mantsy fa ho avy amin’ny taranak’i Davida i Kristy, na ny Mesia.—Matio 9:27; 12:23; Jaona 7:42.
Hoy i Jesosy: “Nahoana àry i Davida no niantso azy hoe ‘Tompo’, araka ny nambaran’ny fanahy masina taminy, ka nilaza hoe: ‘Hoy i Jehovah tamin’ny Tompoko: “Mipetraha eto ankavanako mandra-panaoko ny fahavalonao ho eo ambany tongotrao”’? Koa raha niantso azy hoe ‘Tompo’ àry i Davida, ahoana no maha zanany azy?”—Matio 22:43-45.
Nanantena ny Fariseo fa mety hanafaka azy ireo amin’ny fifehezan’ny Romanina ny iray amin’ny taranak’i Davida. Nampiasa ny Salamo 110:1, 2 anefa i Jesosy mba hanaporofoana fa tsy mpitondra olombelona fotsiny ny Mesia. Niantso azy hoe Tompo i Davida ao. Hipetraka eo ankavanan’Andriamanitra izy ary hampihatra ny fahefany. Tsy nahateny ny mpanohitra noho ny valin-tenin’i Jesosy.
Niresaka tamin’ny mpianany sy ny olona maro teo i Jesosy avy eo. Nampirisihiny izy ireo mba hitandrina tamin’ny mpanora-dalàna sy Fariseo, izay ‘nipetraka teo amin’ny toeran’i Mosesy’ mba hampianatra ny Lalàn’Andriamanitra. Hoy i Jesosy: “Ataovy sy araho izay rehetra lazainy aminareo, kanefa aza manao izay ataony, satria miteny izy nefa tsy manao.”—Matio 23:2, 3.
Noporofoin’i Jesosy avy eo fa mpihatsaravelatsihy ny Fariseo. Hoy izy: “Halehibeaziny ny azy ilay boaty ataony ody fiarovan-tena, izay misy andininy ao amin’ny Soratra Masina.” Nasian’ny Jiosy sasany boaty kely nisy andininy fohy avy tao amin’ny Lalàna ny handriny na ny sandriny. Nohalehibeazin’ny Fariseo anefa ny boatiny mba ho hita fa nazoto nitandrina ny Lalàna izy. Nasaina nanisy mikiramborambo tamin’ny morontongotr’akanjo koa ny Israelita, fa ny an’ny Fariseo nataony lava be. (Nomery 15:38-40) Te “ho hitan’ny olona” mantsy izy ireo.—Matio 23:5.
Nety ho te halaza koa ny mpianatr’i Jesosy ka hoy izy taminy: ‘Aza mety hantsoina hoe Raby ianareo, satria iray ny mpampianatra anareo, ary mpirahalahy avokoa ianareo rehetra. Ankoatra izany, dia aza miantso na iza na iza ho rainareo eto an-tany, fa iray ny Rainareo, dia Ilay any an-danitra. Aza mety hantsoina koa hoe “mpitarika” ianareo, fa iray ny Mpitarika anareo, dia i Kristy.’ Inona àry no tokony hataon’ireo mpianatra, ary ahoana no tokony hiheverany ny tenany? Hoy i Jesosy: “Izay lehibe indrindra aminareo dia tsy maintsy ho mpanomponareo. Izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.”—Matio 23:8-12.
Nilaza loza misesisesy hanjo ny mpanohitra azy i Jesosy avy eo. Hoy izy: “Lozanareo mpanora-dalàna sy Fariseo mpihatsaravelatsihy! Fa hidianareo eo anoloan’ny olona ny fanjakan’ny lanitra, ka ianareo tsy miditra, ary izay miditra tsy avelanareo hiditra.”—Matio 23:13.
Nanameloka ny Fariseo i Jesosy. Tsy niraharaha an’izay noheverin’i Jehovah ho zava-dehibe mantsy izy ireo, fa nitsara araka ny heviny fotsiny. Hoy, ohatra, izy ireo: “Raha misy mianiana amin’ny tempoly, dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianiana amin’ny volamenan’ny tempoly kosa, dia tsy maintsy mitana ny teny nataony izy.” Toy ny jamba izy ireo. Ny volamenan’ny tempoly mantsy no zava-dehibe kokoa taminy noho ny tempoly, izay toerana anompoana an’i Jehovah. Tsy noraharahain’izy ireo koa ‘izay mavesa-danja kokoa tao amin’ny Lalàna, dia ny manao ny rariny sy ny mamindra fo ary ny ho mendri-pitokisana.’—Matio 23:16, 23; Lioka 11:42.
Nilaza i Jesosy fa “mpitarika jamba” izy ireo. ‘Tantavanin’izy ireo ny moka amin’ny zava-pisotrony, nefa ateliny ny rameva.’ (Matio 23:24) Notantavaniny ny moka tamin’ny divay, satria nilaza ny Lalàna fa maloto ny moka. Toy ny nitelina rameva anefa izy ireo satria tsy niraharaha an’izay mavesa-danja kokoa tao amin’ny Lalàna. Maloto koa ny rameva, araka ny Lalàna, saingy lehibe lavitra noho ny moka.—Levitikosy 11:4, 21-24.
Nahoana ny Fariseo no tsy nahateny rehefa nanontanian’i Jesosy momba ny tenin’i Davida ao amin’ny Salamo 110?
Nahoana ny Fariseo no nanalehibe an’ilay boaty misy andinin-teny sy nanalava ny mikiramborambo amin’ny morontongotr’akanjony?
Inona no torohevitra nomen’i Jesosy ny mpianany?
Hizara Hizara Nomelohin’i Jesosy Ireo Mpanohitra Azy